♪ Networking ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း ♫ ~ မြန်မာမိုဘိုင်းနည်းပညာ ♪ Networking ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း ♫
Home » News » ♪ Networking ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း ♫
♪ Networking ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း ♫
သင်တန်းချိန် နာရီ ၁၀၀ အတွင်း CCNA CCNP (R&S) အဖြစ်သာမက 100% သင်တန်းကြေး ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်။
သင်တန်းသား ၁၀ဦးသာ လက်ခံပြီး သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့် အထူး အစီအစဉ်။
"Show Your Passion to BecomeaProfessional Network Engineer"
Team RHC ( Singapore ) မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးသော အစီအစဉ် တစ်ခုကို စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ... Show Your Passion Challenge Program လို့ နာမည် ပေးထားပါတယ် ... Program ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သင့်ရဲ့ Professional Network Engineer ဖြစ်ချင်တဲ့ Passion ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ... Discipline လို့ခေါ်တဲ့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ကြိုးစားမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာကို Challenge လုပ်တဲ့ Program တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ... ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ဆိုတော့ ...
သင်ဟာ Team RHC ရဲ့ Teaching Time နာရီ 40 မပြည့်ခင်မှာ CCNA ( Routing & Switching ) Exam ကို အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ရပါမယ်
သင်ဟာ Team RHC ရဲ့ Teaching Time နာရီ 100 မပြည့်ခင်မှာ CCNP ( Routing & Switching ) Exam ကို အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ရပါမယ် ...
Rewards for your hard-work
သင့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုအတွက် Rewards ကတော့ Step2ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပါက သင့်ရဲ့ ပေးသွင်းထားသော သင်တန်းကြေးများကို 100% ပြန်လည်ပေးအပ်ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Get Your Training by Team RHC ...
Join Our Program called " Show Your Passion To BecomeaProfessional Network Engineer " ...
Show Your Passion To BecomeaProfessional Network Engineer
သင်ဟာ Team RHC ရဲ့ Teaching Time နာရီ 40 မပြည့်ခင်မှာ CCNA ( Routing & Switching ) Exam ကို အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ရပါမယ် ... ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ? Team RHC ရဲ့ ၄ နှစ်ကျော် Teaching Experience နဲ့ Techniques Strategy များအရ လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ... သင့်ဘက်က နှစ်ခုပဲ လိုအပ်ပါတယ် ... Passion & Discipline ... အဲဒီ နှစ်ခု နဲ့ Team RHC ရဲ့ Study Strategy များကို ပေါင်းစပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ? သိပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... RHC ရဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းများကို မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ... လက်ရှိတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားများကိုလည်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ...
သင်ဟာ အဲဒီ အဆင့် နှစ်ဆင့်ကို အောင်မြင်စွာ မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ 100% သင်တန်းကြေးများဟာ
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်း LAND RENEWAL အတွက် Donation အဖြစ် လှူ ဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
အောင်မြင်သူများအတွက် နောက်ထပ် ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုရှိပါသေးတယ် ... 100% သင်တန်းကြေး Refund ထဲမှ 20% [or] 40% [or] 50% [or] 100% ကို Donation အဖြစ် ပြုလုပ်လို့လည်း ရပါတယ် ... သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် လွပ်လပ်စွာ ရွေးချယ်မှုကို Team RHC မှ လေးစားစွာ အသိအမှုတ်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီ Program ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ Apply လုပ်မည်ဆိုပါက
Please Contact +65 9006 3239 ...
၁၀ ယောက်သာ လက်ခံမည် ဖြစ်ပါတယ် ...
We would like to request to share all your friends ...